Manchester City Oo Ku Dhow Inay Heshiis La Gaarto Diego Rosa
HomeWararka CiyaarahaManchester City oo ku dhow inay heshiis la gaarto Diego Rosa
Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhowdahay inay gacanta kusoo dhigto ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Gremio Diego Rosa .
18 jirkaan ayaa si xoogan loola xiriirinayay kooxda Pep Guardiola sanadkaan, laakiin kooxda reer England ayaan ku guuleysan inay dhameystiraan heshiiska intii lagu jiray suuqa kala iibsiga xagaaga.
Sida laga soo xigtay Manchester Evening News , City ayaa haatan ogolaatay heshiiska wiilka yar, kaasoo ay u badan tahay inuu ku baxo 5.5 milyan oo ginni ugu horreyn, inkastoo heshiiska uu ugu dambeyn kor u kici karo 23m.
Warbixinta ayaa sheeganeysa in Rosa la filayo in amaah lagu siiyo markii uu yimaado, iyadoo kooxda reer Belguim Lommel SK – oo ka tirsan kooxda Kubadda Cagta City – loo arko inay tahay meel macquul ah.
Da’yarka ayaan wali ciyaarin kulankiisii ​​ugu horeeyay ee kooxda Gremio laakiin qaab ciyaareedkiisa heer dhalinyaro iyo xulka Brazil ee da’doodu ka hooseyso 17 ayaa lagu soo waramayaa inay u horseedday indha indheyn badan.
City ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa inay miisaameyso inay bisha Janaayo u dhaqaaqdo weeraryahanka Barcelona Lionel Messi .